Tanana varavarana ho an'ny fiara Mercedes TRANO ivelan'ny vavahady ivelany Tanana havia / havanana 9017600359 9017600459 0007601359 orinasa sy mpamatsy | ZODI Auto Spare Parts
Bowl Sperator Water Oil 20771578
Tanana am-baravarana ho an'ny Mercedes kamiao ivelan'ny vavahady ivelany Tanana havia / havanana 9017600359 9017600459 0007601359
Karazana: Tanana am-baravarana
Fiara fiara: Ho an'ny MERCEDES-BENZ
Tanana am-baravarana fiara Sprinter ambony kalitao 901 902 903 Varavarana hidy 0007601359
Anarana Tanana am-baravarana fiara Sprinter ambony kalitao 901 902 903 Varavarana hidy 0007601359
Brand Fizarana Super
Fe-potoana fandoavana L / C, T / T, Western Union, Moneygram, Paypal
Package Fonosana tsy miandany
Ora nanomezana Ao anatin'ny 15 andro aorian'ny fanamafisana ny fandoavam-bola
Tsena lehibe Firenena eropeana, atsimo atsimo aziatika, afovoany atsinanana, afrikana ary ny sasany amin'ny amerikana
Fametrahana amin'ny fiara: Havia na hidina ankavia sy havanana
Ho an'ny MERCEDES BENZ SPRINTER ATEGO AXOR
Ho an'ny VW LT 1996-2006
Izahay dia mpanamboatra matihanina amin'ny faritra misy fiara, mampiditra Volkswagen Transporter, Fiat Ducato, Ford Transit, Renault Master, Benz Sprinter, Iveco Daily sns.Ankoatr'izany dia afaka manome ny manaraka ny vidiny marina indrindra sy ny vokatra avo lenta ho anao izahay.
2. Tanana am-baravarana
5. Roller varavarana
6. Ny hafa (Mifandraisa aminay)
Endri-javatra ny vokatra
1, Logo iray dia ho ampiana ho volavolain'ny mpanjifa.
2, karazana famaritana feno
3, fanaraha-maso kalitao henjana
4, maharitra amin'ny fampiasana sy fiankinan-doha amin'ny fiankinan-doha
5, Fahalalana ara-teknika matihanina;
6. Mpiara-miasa amin'ny serivisy;
7.Systerma mpamokatra tsara indrindra sy fiaraha-miasa;
8, Rafitra fitantanana baiko henjana;
9, Tontolo iainana fivarotana tsara sy azo antoka.
10.Packeging tsara sy milamina, araka ny mpanjifa refa
11. Manomeza torohevitra matihanina ho an'ny mpanjifa amin'ny tsena samihafa
Andiany Fizarana Auto fizarana anarana Kilasy kalitao
Engine Part Spark Plug, kitapo varingarina, varingarina loha, varingarina, karburatera, setrin'ny piston, setrin'ny peratra piston, solika paompy, tsorakazo, setran'ny valizy, sandry rocker, mpanaraka cam, mpanaraka cam misy vatan-kazo, vovoka afovoany, tahony ivelany, vavahady cam, fitaovana speedo, sns. OEM, A
Fitaovana fandefasana Kitapo fanombohana, vatan-kazo, trano fonenana assy, ​​kitapom-pifandraisana, kitapom-bolongana, assy clutch, kapila kapila, takelaka tsindry Clutch, rojo sns. OEM, A
Sela kodiarana Rear hub, cap back bub, cap front hub, front hub, sprocket, front fre disk, pad pad, frein kiraro, rim, rubber back hub, collar cushion, racing steering, niteny, bolt sprocket aoriana, axle, hydraulic frein master silinder etc. OEM, A
Faritra tariby Tariby throttle, tariby clutch, frein front, tariby metatra, tariby switch aloha, switch hafainganana, tsipika bateria, tariby tariby, frein switch manaraka, tariby hafainganana sns. OEM, A
Vatan'ny vatana Mpitroka tampoka aoriana, lohan'ny familiana assy, ​​pedal fanovana fanodinana, assy familiana, tehina frein, pedal frein, muffler fanalefahana, fingotra fitsaharana tongotra, fitaterana, fijoroana eo anoloana, fikorontanana eo afovoany, seza afovoany, seza, fitoeran-tsolika, bara fitantanana, aloha mpiambina fotaka, tsorakazo pedal eo anoloana, fanombohana fanombohana, sandry forkatra aorina, jiro lohan-doha, fametahana setroka, coil ignition sns. OEM, A
Fitaovana elektrika Clutch / frein switch set, batterie, fly-wheel assy, ​​clutch / frein lever & switch assy, ​​starter relay, tandroka, flasher, stator self assy, ​​handle lock, fuel lock, stator assy, ​​starter coil / light coil, C, D, I , fanitsiana, famonoana afo, tanky solika sns. OEM, A
Piera plastika Mpitana jiro, metatra assy, ​​fitaratra, tariby misy jiro lohany, fitoeran-tsolika fonosana, setra mpiaro lever, jiro an-trano, fender aloha, hazavan'ny rambony, fender aoriana, fonosana rojo, jiro loha, hazavan'ny rambony, jiro winker, fonony sisiny sns . OEM, A
Gasket series Kitapo tombo-kibon'ny solika, varingarina gasket, fanalefahana gasket, kitapo feno kitapo, setroka vita amin'ny fehikibo, fiarahan'ny carburetor sns. OEM, A
Accessories Boaty rambony, fiarovan-doha, sticker, satroka, akanjo, fonon-tànana, tompon'ny loko, rafitra fanairana-mp3, rafitra fanairana mp3-2, rafitra fanairana, harato fandrehitra solika, pedal amin'ny tongotra an-tongotra miaraka amina loko, pedal amin'ny tongotra aoriana misy inflator miloko loko, tombo-kase kodiarana, fehin-kibo mifehy miaraka amin'ny loko sns.
Kalitao sy serivisy ao amin'ny ZODI, ny laharam-pahamehantsika # 1 dia manome foana ny mpanjifanay vokatra tsara kalitao sy serivisy ho an'ny mpanjifa ambony.
Fotoana fitarihana haingana Nanolo-tena izahay hanome ny fotoana fiovana haingana indrindra ary hiasa mafy mba hahazoana antoka fa feno ny fe-potoana rehetra.
Vidim-bola tsy hay tohaina Miezaka hatrany izahay mitady fomba hampihenana ny vidin'ny famokarana ary hampita aminao ny tahiry!
Fampahafantarana momba ny marika Ny tanjon'ny marika matanjaka rehetra dia ny fanatratrarana ny fahatsiarovan-tena izay mampiorina ny hevitra momba ny kalitao sy ny lanjany amin'ireo mpanjifanao mety hitranga.
Fizarana manokana momba ny tolotra manokana - Afaka mamolavola ny katalaogy miorina amin'ny fangatahan'ny mpanjifa izahay hanampy anao hampivelatra ny tsena vaovao;
Torolàlana momba ny kaomandy
Fampahalalana momba ny lamina ankapobeny
Tena mirehareha amin'ny asanay sy amin'ny vokatra maro karazana atolotray izahay. Manana traikefa amin'ny fanompoana ny Moyen Orient, Afrika, ny tsenan'i Etazonia, ny tsena eropeana ary ny tsenan'i Afrika isika, ny tsena amerikana atsimo.
Fantaro azafady fa ny fotoam-pamokarantsika dia miankina amin'ny entana manokana sy ny habetsaky ny entana. Ny fahombiazantsika dia nifototra tamin'ny fahatakarantsika ny fitakiana sy ny toetran'ny fe-potoana fampiroboroboana sy ny marketing.
Izany no mahatonga anay manome antoka foana fa ny ora rehetra dia aterina ara-potoana.
Hamarino eto ambany raha mila fanazavana fanampiny momba ny fametrahana baiko
1. Fanadihadiana-Professional teny nalaina.
2. Hamarino ny vidiny, ny fotoana itarihana, ny fonosana takiana, ny fandoavam-bola sns.
3. Ny varotra ZODI dia mandefa ny Invoice Proforma miaraka amin'ny tombo-kase ZODI.
4. Ny mpanjifa manao ny fandoavana ny vola apetraka ary mandefa tapakila amin'ny Banky.
5. Hampahafantatra ny mpanjifa fa nahazo ny fandoavam-bola izahay, handamina ny famokarana ary hampahafantatra ny ora novinavinaina.
6. Atsaharo ny sary famokarana-famokarana faobe hahazoana fankatoavana. Azonao atao ihany koa ny mandamina ny fanaraha-maso an'ny antoko fahatelo.
7. Ireo mpanjifa dia mandoa vola amin'ny fifandanjana ary mandefa ny entana ny BEE .Mahazo mandanjalanja ihany koa ny fe-potoana fandoavam-bola amin'ny B / L Copy na L / C fe-potoana fandoavana. Ampahafantaro ny laharana fanaraha-maso ary zahao ny satan'ny mpanjifa.
8. Ny baiko dia azo lazaina hoe "vita" rehefa mahazo ny entana ianao ary afa-po amin'izany.
9. Fanamarihana momba ny BEE momba ny kalitao, serivisy, valin-teny sy sosokevitra amin'ny tsena. Ary afaka manao tsara kokoa isika.
F: Inona avy ireo faritra fiara omenao?
A: Fiarovan-tsolon'ny motera, kojakoja chassis automobil, faritra misy fiatoana fiara, rafitry ny fifindran'ny fiara, sivana fiara mandeha ho azy, kojakoja fanamoriana ary karazana faritra hafa amin'ny Auto.
F: Ampiasaina manerantany ve ny vokatrao?
A: Eny, manome an'i Moyen-Orient, Afrika, Amerika atsimo, Azia atsimo, Okraina, Italia, Aostralia sns sns izahay, ny ankamaroan'ny faritra misy ny motera dia ampiasaina manerantany amin'ny fampiharana.
A: T / T 30% toy ny fametrahana, ary 70% alohan'ny fanaterana.
F: Ahoana ny amin'ny fotoana fandefasana anao?
A: Amin'ny ankapobeny dia maharitra 3 to10 andro fiasana aorian'ny nahazoanao ny vola aloanao mialoha. Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny haben'ny baikonao.
F: Afaka mamokatra arakaraka ny santionany ve ianao?
F: Mitsapa ny entanao rehetra alohan'ny fanaterana ve ianao?
A: Eny, manana fitsapana 100% izahay alohan'ny fanaterana.
F: Ahoana no anaovanao ny orinasantsika maharitra sy fifandraisana tsara?
A: 1.Mitazona kalitao tsara sy vidiny mifaninana izahay hahazoana antoka fa hahazo tombony amin'ny mpanjifanay.
2. Manaja ny mpanjifa rehetra amin'ny maha sakaizanay izahay ary manao raharaham-barotra amin-kitsimpo sy manao sakaiza amin'izy ireo, na avy aiza na avy aiza.
Previous: Pulley Tensioner Pulley ho an'ny Mercedes-Benz OEM 0005500833 0005501633
Manaraka: Hevitra avo lenta ho an'ny MB CABINA641 6418200861 LH 6418200961 RH 3818203961 LH 3818204061 RH
Jiro zavona ho an'ny BENZ ACTROS MP2 L: 9438200056 na R: ...
Plastika Rear Mudguard Oem 9435200020 ho an'ny MB Act ...
fivarotana mafana kamio mavesatra eropeana fiara fitaterana ...
Ambongadiny ambongadiny ho an'ny benz frein drum OEM 62442 ...
OEM 9608103516 LH fitaratry ny kamio ho an'ny Mercede ...
Cast Iron Truck Front Brake Drum 6584210001 ho an'ny MB